FILE - In this Thursday, Aug. 2, 2018 file photo, Zimbabwean's main opposition candidate Nelson Chamisa speaks at a news conference in Harare, Zimbabwe. Zimbabwe's main opposition party has filed a legal challenge to the results of the country's first election without Robert Mugabe on the ballot, alleging irregularities and calling for a fresh vote or for candidate Nelson Chamisa to be declared the winner. (AP Photo/Jerome Delay, File),FILE - In this Thursday, Aug. 2, 2018 file photo, Zimbabwean's main opposition candidate Nelson Chamisa speaks at a news conference in Harare, Zimbabwe. Zimbabwe's main opposition party has filed a legal challenge to the results of the country's first election without Robert Mugabe on the ballot, alleging irregularities and calling for a fresh vote or for candidate Nelson Chamisa to be declared the winner. (AP Photo/Jerome Delay, File)
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe’s main opposition party on Friday filed a legal challenge to the results of the country’s first election without Robert Mugabe on the ballot, alleging irregularities and calling for a fresh vote or for their candidate Nelson Chamisa to be declared the winner.